Bit By Bit - Lamesa fiaraha-miasa - 5.1 Sava lalana
Wikipedia dia mahagaga. Ny fiaraha-miasa ny mpiasa an-tsitrapo faobe namorona mahafinaritra rakipahalalana izay tsy ampy ho an'ny rehetra. Ny fanalahidin 'ny fahombiazana dia ny Wikipedia Tsy zava-baovao ny fahalalana; fa, dia ny fiaraha-miasa amin'ny teny vaovao. Ny taona nomerika, soa ihany, ahafahan'ny maro karazana fiaraha-miasa vaovao. Noho izany, dia tokony izao hanontany hoe: inona no olana goavana ara-tsiansa-olana fa tsy afaka hamaha tsirairay-no miara-hiatrehana izao?
Ny fiaraha-miasa amin'ny fikarohana Tsy zava-baovao, mazava ho azy. Inona no atao hoe vaovao, na izany aza, dia ny vanim-potoana nomerika ahafahan'ny fiaraha-miasa amin'ny iray lehibe kokoa sy isan-karazany kokoa ny hametraka ny olona: ny an'arivony tapitrisa ny olona manerana izao tontolo izao amin'ny aterineto. Manantena aho fa ireo fiarahamiasa faobe vaovao dia hilefitra vokatra mahagaga tsy noho ny isan'ny olona mandray anjara, fa koa noho ny fahaiza-manao sy ny fomba fijery samihafa. Ahoana no mampiditra olon-drehetra miaraka amin'ny Internet fifandraisana eo amin 'ny dingana fikarohana? Inona no azonao atao amin'ny 100 fikarohana mpanampy? Ahoana ny 100.000 mahay mpiara-miasa?
Maro ny endrika faobe fiaraha-miasa, ary ny solosaina matetika ny mpahay siansa mandamina azy ireo ho any amin'ny malalaka sokajy maro ny ara-teknika mifototra amin'ny toetra (Quinn and Bederson 2011) . Ao amin'ity toko ity, na izany aza, aho handeha nosokajiana faobe tetikasa mifototra amin'ny fiaraha-miasa ny fomba azo ampiasaina ho an'ny fiaraha-monina fikarohana. Indrindra indrindra, mihevitra aho fa dia manampy ny hanavaka telo karazana tetikasa: olona computation, misokatra antso, ka nizara fanangonana antontan'isa (Sary 5.1).
Aho hamaritra tsirairay ireo karazana ao amin'ny tsipiriany lehibe tatỳ aoriana ao amin'ny toko, fa ankehitriny aoka aho milaza tsirairay fohifohy. Olombelona computation Ny tena tsara mifanaraka tetikasa dia ho mora-asa-lehibe-ambaratonga olana toy ny apetaho isaky ny tapitrisa sary. Ireo no tetikasa izay tany aloha mety ho tanterahana amin'ny alalan'ny fikarohana undergraduate mpanampy. Fanomezana tsy mitaky fahaiza-manao asa-mifandray, ary ny farany dia matetika output eo ho eo ny fandraisana anjara rehetra. Ny mahazatra ohatra ny olombelona computation tetikasa dia Galaxy Zoo, izay mpirotsaka an-tsitrapo iray hetsy nanampy astronoma tapitrisa manasokajy ny vahindanitra. Open antso tetikasa Ny tena tsara dia mety amin'ny olana izay mitady tantara sy ny tsy ampoizina ny valin'ireo fanontaniana namoaka mazava. Ireo no tetikasa izay tany aloha mety ho anjara nanontany mpiara-miasa aminy. Fanomezana avy amin'ny olona izay manana asa manokana-mifandray fahaiza-manao, ary ny farany output matetika ny tsara indrindra amin'ny fanomezana rehetra. Ny mahazatra ohatra ny antso misokatra dia ny Netflix Loka, izay an'arivony ny mpahay siansa sy ny mpijirika niasa mba hanana algorithms vaovao mba mialoha mpanjifa 'naoty ny sarimihetsika. Farany, nizara tetikasa fanangonana antontan'isa Ny tena tsara dia mety amin'ny goavana fanangonana antontan'isa. Ireo no tetikasa izay tany aloha mety ho tanterahana amin'ny alalan'ny fikarohana undergraduate mpanampy na fanadihadiana fikarohana orinasa. Fanomezana matetika avy amin'ny olona izay mahazo ny tianao fa ny mpikaroka tsy, ary ny vokatra farany dia tsotra fitambarana ny fanomezana. Ny mahazatra ohatra ny nizara fanangonana antontan'isa no eBird, izay an-jatony ny mpiasa an-tsitrapo an'arivony anjara tatitra momba ny vorona izy ireo hahita.
Sary 5.1: Mass schematic fiaraha-miasa. Ity toko ity dia manodidina ny telo lehibe voalamina endriky ny faobe fiaraha-miasa: olona computation, misokatra antso, ka nizara fanangonana antontan'isa. More ankapobeny, faobe fiaraha-miasa avy amin'ny saha Mitambatra hevitra toy ny olom-pirenena momba ny siansa, crowdsourcing, ary iombonana sampam-pitsikilovana.
Lamesa fiaraha-miasa dia manana lava, manan-karena tantara ao amin'ny sehatra toy ny astronomia (Marshall, Lintott, and Fletcher 2015) ary ny tontolo iainana (Dickinson, Zuckerberg, and Bonter 2010) , saingy tsy mbola fahita any amin'ny fiaraha-monina fikarohana. Na izany aza, amin'ny filazalazana fahombiazana tetikasa avy amin'ny hafa sy ny fanomezana sehatra manan-danja vitsivitsy fandaminana fitsipika, dia manantena ny handresy lahatra anareo ny zavatra roa. Voalohany, faobe azo harnessed fiaraha-miasa ara-tsosialy ho an'ny fikarohana. Ary, faharoa, mpikaroka izay mampiasa faobe fiaraha-miasa dia ho afaka hamaha ny olana izay toa tsy azo teo aloha. Na dia matetika fiaraha-miasa faobe nasandratry ho toy ny fomba mba hamonjy vola, dia mihoatra lavitra noho izany. Rehefa hasehoko, faobe fiaraha-miasa no tsy mamela antsika hanao fikarohana mora, dia mamela antsika hanao fikarohana tsara kokoa.
Ao amin'ny toko etsy ambany, ho an'ny tsirairay ny telo lehibe faobe endrika fiaraha-miasa, dia mamaritra ny prototypical ohatra; ohatra manan-danja bebe kokoa fanampiny hevitra amin'ny ohatra; ary farany mamaritra ny fomba fiaraha-miasa amin'ny teny faobe mba ho ampiasaina amin'ny fikarohana ara-tsosialy. Ny toko faha-dimy dia hanatsoaka hevitra amin'ny toro lalana afaka manampy anao mamaritra ny fiaraha-miasa ny tetikasa faobe.